इन्टरनेट मन्त्रालयहरू - Pulpit पूर्वावलोकन
मार्क एन। पनी, सम्पादक
मार्क 1994 पछि मसीह को अस्टिनविले चर्च मा Pulpit मंत्री को रूप मा सेवा गरेको छ। उहाँ फ्रिग्र-हार्डमन युनिवर्सिटी, लाइप्सकोब विश्वविद्यालय र सुधारिएको सेमिनारको डिग्री छ। FHU मा, त्यो प्रचारका लागि केटा एन। वुड्स छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता थिए। उनले भाले घाटी बाइबिल संस्थान, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिश्चियन कलेज, र फुलरनेर विश्वविद्यालयमा कलेज स्तरको बाइबल पाठ्यक्रमहरू सिकाउँछन्। उनले क्यारिबियन टापुहरू र पूर्वी युरोपमा मिशन काम गरे। उनी प्रत्येक वर्ष यूक्रेनमा व्यापक शिक्षा र प्रचार गर्छन्। उहाँले प्रति वर्ष चार देखि छ सुसमाचार सभाहरूमा प्रचार गर्नुहुन्छ र भाइरस व्याख्यान र सेमिनारहरूमा बोल्नुहुन्छ। उहाँ हिलमिल्टन, एएलमा मेभवुड क्रिश्चियन शिविरमा मर्गन काउन्टी हप्ताको लागि सह निर्देशक हुनुहुन्छ र सल्लाहकार बोर्डमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उनीहरूले लेजरहरूलाई नेतृत्व कार्यक्रमको साथ नजिकका काम गर्छन्।
प्रेमको सात आयाम!
परमेश्वरलाई महिमा हुनुहोस्-ठूला ठूला कुराहरू उहाँ सम्पन्न हुनुभयो!
हामीले किन परमेश्वरलाई डर मान्नुपर्छ?
कसरी बलियो स्थानीय मण्डलीको निर्माण गर्नुहोस्!